Buubaa oo safaaradda Soomaalida Kenya u magacaabay M.J. shaqadana ka fadhiisiyay Ina Cali Ameerika iyo Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ah ee Soomaliya oo caawa u dhoofaya Saciidiga si uu shirka uga horjoogsado Prof. Geeddi. Ruunkinet 27/0/07
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta u magcaabay si ku meel gaar ah ku simaha safiirka Soomaaliya ee Kenya mudane M. J. oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda FS.
Mudne M.J oo ka soo jeeda beesha Leyskase ayaa waxaa uu ku bedelay Maxamed Cali Ameerika oo dhawaan loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii ra'isul wasaare Geeddi uu ka reebay Buubaa shirka ka dhacaya Sacuudiga oo ay ka qeyb galayaan wafdi uu hoggaaminayo Prof. Cali Maxamed Geeddi.
Wafdiga Prof. Geeddi ayaa waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah xildhibaan Farxaan.
Sidoo kale, waxaa la filayaa in uu caawa u dhoofo dalka Sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ee DFS xildhibaan Buubaa si uu uga qas u geliyo wafdiga ra'isul wasaare Geeddi ee ka qey b galaya kulanka madaxda carabta.
Prof. Geeddi iyo Buubaa ayaa dhow jeer horay isugu dhacay arrima la xiriira dhaqaalaha macaawimada ah ee dowladda ay siiyaan beesha Caalamka iyo hay'adaha gaar ka ah.
Labadan mas'uul ayaa lagu sheegaan in ay yihiin shaqsiyaad aad u lacag jecel oo ujeedooyinkooda safarkoodu inta badan u aado arrimo dhaqaale.